Kuratidza zvinyorwa neelebheri Panorama
Rokytnice nad Jizerou nguva yechando
Kozákov (744 m) ndiyo gomo rakakwirira kupfuura rose reKozákovský ridge uye Bohemian Paradhiso. Kubva pamutemo wekutanga, musoro wakatsvaga sechitoro chematombo anokosha, avo vashanduri vekare vakagadzira zvishandiso nyore. Mumakona ematombo anozadza agate, jasper, amethyst, kristini, magini nemamwe mabwe anokosha-akave akafukidzwa. Nzvimbo iyi yakashandiswa muMiddle Ages kurongedza temberi. Kozákov zvakare inzvimbo yakakurumbira yeparagliding.
Nzvimbo huru yenzvimbo yeKozkov inoumbwa nematombo asingagoneki, ayo akafukidzwa nechechi yepamusoro yebasalt uye nzvimbo dzinoputika makomo kumusoro, kuchamhembe nekumabvazuva. Pamberi pe6 kusvika ku4 kwemamiriyoni emakore, Kozakov yaiva gomo rinoputika. Rutivi rwekumadokero rweKozákov rwakaumbwa zvikurukuru nematombo ematombo eUpper Cretaceous Cenomanian. Izvozvi zvave zvakaputsika mukati memauto mashomanana muTestamende uye zvichiendeswa kune fomu yavo yemazuva ano.
Iyo yakakura asymmetrical kukwirira panzvimbo yekukwira kwekunze kweanticlinal basaltandezite (melaphyry) gomo neunyoro uye yakaderera mabvazuva ekumawere (15-20 °…